Jelly Bean rom ကို HTC Desire S တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Androidsis
Francisco Ruiz | | HTC က, ရွမ်, Android ဗားရှင်း
ငါအောက်တွင်တင်ပြသော rom၏သင်တန်း, တိုက်ရိုက်ယူ အကောင်းဆုံးဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖိုရမ်ကနေ မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် အန်းဒရွိုက်, ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ်သည့် တောင်သူလယ်သမား, ယနေ့နှင့်အတူယနေ့အထိဖို့အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက် 4.1.1 Jelly Bean ကို Desire S. အတွက် \_ t
၎င်းတွင် bug အချို့ရှိနေသော်လည်းဤ rom နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ပုံမှန်တည်ဆောက်မှုနှင့်အတူ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါထိုအမှားများ (သို့) စနစ်ချို့ယွင်းမှုများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်စက်သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
သူ့အတွက်မလုံလောက်သေးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ရှေ့ကင်မရာ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သေးသော်လည်းသင်၎င်း၏လည်ပတ်မှုကိုမှန်ကန်သောနည်းဖြင့်နီးကပ်ရန်နီးကပ်နေပြီ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အလုပ်မလုပ်သောအရေးကြီးသောအရာနောက်တစ်ခုမှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ကြားနေ.
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အရာရာတိုင်းလုပ်သင့်သလိုအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး rom ဟာဒီစက်မှာအရည်ပျော်ပြီးတည်ငြိမ်နေတယ်။ HTC ကအဆိုးဆုံးအရာဖြစ်တာမို့အမှားတခုခုကျူးလွန်တာထက်ပိုပါတယ် ဘက်ထရီ ဤ terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအရာများထက်အနည်းငယ်ပိုသုံးစွဲသည် အန်းဒရွိုက်.
1 ဒီ rom ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
2 Rom ထည့်သွင်းပုံ
ဒီ rom ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
ဤ Rom ကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါတို့ရှိသည် ကို HTC Desire S က အမြစ်တွယ် ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူ installedရှိခြင်းအဖြစ် အဆိုပါ Bootloader သော့ဖွင့်.
ကျွန်ုပ်တို့လည်းရှိရမည် ဘက်ထရီအပြည့်အဝအားသွင်း ကိရိယာချိန်ညှိချက်များမီနူးမှတက်ကြွစွာ USB debugging အဖြစ်။
ထည့်သွင်းရန် ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူ, တစ်ကြိမ် အမြစ်တွယ် Terminal မှလျှောက်လွှာကို Play Store မှသာဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည် Rom Manager.
Rom ကို install လုပ်ရန်၊ zip and download လုပ်ရန်သာလိုသည် decompress လုပ်စရာမလိုပဲကူးယူပါ ထဲမှာ sdcard Device ကနေ reboot လုပ်ပြီး recovery mode ကိုသွားပါ။
အဆင့်မြင့် Wipe Dalvik cache ကို
ကျွန်ုပ်တို့သည် rom ၏ zip ကိုရွေးပြီး install လုပ်သည်။
Done!အကယ်၍ သင်သည်စာလုံး၏အဆင့်အားလုံးကိုလိုက်နာပြီးပါကသင်၏ Android ကိုစနစ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်။ 4.1.1 သို့မဟုတ်ပိုကောင်းအဖြစ်လူသိများ ဂျယ်လီစေ့.
နောင်တွင်ဤ rom အားမွမ်းမံမှုများတွင်သင် လုပ်၍ သာ install လုပ်ရန်လိုသည် Dalvik cache နဲ့ cache partition ကိုသုတ်လိုက်ပါသင်၏ဒေတာ (သို့) သင်၏ထည့်သွင်းထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကြောင့်သင်ရှုံးနိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ရင်းမြစ် - တောင်သူလယ်သမား
ဒေါင်းလုပ် - Rom Manager အခမဲ့, BlinBeand v1.5
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC Desire S၊ Rom BlindBean v1.5 Jelly Bean AOKP ဖြစ်သည်
ငါ Rom ကိုတပ်ဆင်လိုက်ပြီးဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမြင်းနဲ့ဂီယာလည်ပတ်နေပြီးမတိုးတက်ဘူး။ သငျသညျနောက်ဆုံးမည်သူမဆို? ပြန်ဖွင့်လားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလား။
Recovery ပြန်လုပ်ပြီး rom ကို flash လုပ်ပါ။ wips နှင့်ဘာမှမပါဘဲ zip မှ sdcard ကိုသာ install လုပ်ပါ
Samsung Galaxy S အတွက် Android Jelly Bean ကိုအသုံးပြုထားသည်